Ungatanga sei mubasa raSir Terry Pratchett | Zvazvino Zvinyorwa
Joaquin Garcia | | Vanyori, Fantasy
Iko hakuna mutero uri nani kumunyori pane kuti basa rake riverengerwe, kunyangwe iye munyori ari mubvunzo apa mari mbiri dzesirivha kumunhu wechikepe. Mune zvimwe zviitiko, kuverenga nekuverenga zvekare basa rake ibasa rakareruka asi kune vamwe vakaita kuverenga basa raSir Terry Pratchett kwakareba uye kwakaoma nekuti basa rake rakakura uye rakareba.
Sir Terry Pratchett aive munyori weBritish aiyevedza nyika uye akashamisika neMagaDisco Saga yake, nhevedzano yemanovels aitaura nezve nyika inonakidza uye zvakasiyana nezvinozivikanwa nhasi, kupi Pevhu & Dragons uye Tolkien ivo vakaratidza paradigm yeinonakidza novel.
1 Korona yeMufudzi, basa raPratchett rapashure rinoenderera mberi nesaga reDiscworld
3 Varindi! Varindi?
4 Vamwari Vadiki
5 Mashura akanaka
7 Iyo Gnome Ekisodho Trilogy
8 Iyo Johnny Maxwell trilogy
9 Mhedziso parwendo urwu kuburikidza nebasa raSir Terry Pratchett
Korona yeMufudzi, basa raPratchett rapashure rinoenderera mberi nesaga reDiscworld
Nehurombo musi waMarch 12, 2015, Sir Terry Pratchett vakatisiya, mushure mekurwa kwakaomarara neAlzheimer's, asi asati atisiya akakwanisa kupedzisa bhuku rake razvino, Korona yeMufudzi, basa rapashure mekufa riri kubudirira mukati mevateveri vazhinji vakawana Sir Terry Pratchett.
Kana isu tichifunga nezve kuverenga kunoitwa nevaSpanish, zvinhu zvinobva zvaoma ipapo kuburitswa kwemabasa hakuna kuitwa sekuburitswa kwavakaitwa asi neimwe nzira neimwe nzira, saka zvinhu zvinotonyanya kuoma. Ndosaka taida kuti chinyorwa ichi chiratidze kurongeka kwekuita kuverenga kwemabasa aSir Terry Pratchett, kwete chete kupa mutero kumunyori asiwo kunakidzwa nekuiverenga.
Saga yeDiscworld kana inozivikanwa zvakare se disc nyika ndiro saga rakakurumbira remunyori, asi Sir Terry vaisawanzoburitsa mabasa ane chekuita neSaga uye dzimwe nguva Ndakaichinjanisa nemamwe marudzi ezvinyorwa kana mabasa izvo zvaive kure nekutevera zano reMundo disco.
Iyo inozivikanwa saga inotanga nekutamba Ruvara rweMashiripiti rakabudiswa muna 1983. Iri basa taura nezveRicewind, muroyi mudiki asingabatsiri uyo asina kudzidza kubva kuInvisible School of Magic. Iyo Ricewind adventure saga inoteverwa neanotevera mabasa: Chiedza chinonakidza, Rechicero, Eric, Nguva dzinonakidza uye Nyika yekuguma kwenyika.
Zvekuuya kwaRicewind handizvo chete zvinoumba Discworld Saga. Kune zvakare subsaga Varoyi, Iyo inoumbwa neinotevera kuunganidzwa kwemanovel uye inopera nebasa rapashure raSir Terry Pratchett:
Varume vadiki vakasununguka
Nguwani izere nedenga
Nguva yechando smith
Aya akateedzana emabhuku anopindura kune yekufungidzira nyika asi mhando yayo yakasiyana zvakanyanya neiyo yediscworld saga. Nguva ino ndezvemabhuku enhau dzevatikitivha yakagara mune inonakidza guta reAnkh-Morpork.
Varindi! Varindi? Inoonekwa seinovhero yekutanga mune ino saga uye yakanakira muverengi wevadzidzi, asi vamwe vanozvitenda Kurinda kwousiku. Chero zvazvingava, idzi dzinova dzinoteverwa
Varume vari mumaoko
Night Watch (kana Varindi! Varindi?)
Ndiyo saga inonakidza uye yemazuva ano kana zvichikwanisika naSir Terry Pratchett sezvo achiedza kuita kusekesa kwehukama hwenguva yake pakati pesimba neChechi pamwe nekuseka zvitendero. Basa rinokosha iyo nyaya yaMwari Om uye muporofita wake Brutha. Iri basa rinotaura nezve kuziva, chinamato chaMwari mumwe chete icho chiri chekunyepedzera asi chinogona kufananidzwa nechiKristu chazvino kana chiIslam.
Iyo nyaya inotaura nezvekusvika munyika yepanyama yamwari Om kwaanoona uye achisimbisa kuti kunyangwe aine chinamato chikuru chechitendero, muporofita anonzi Brutha ndiye ega anotenda zvechokwadi kwaari. Mune ino kesi, isu tinokurudzira zvakasimba kuti iwe usarudze yazvino vhezheni yebasa, kubvira shanduro dzekutanga dzakasiya dzimwe ndima dzenhoroondo yekutanga, kukanganisa kwakagadziriswa.
Iri basa rinoteverwa Pyromides y Rufu nezvinozotevera. Pyromides anotaura Pteppic, muchinda mudiki weiyo mudiki Djelibeibi humambo, mubatsiri weiyo yekare Ancient Egypt. Iyi nyaya inorondedzera zvinoitika zvemuchinda mudiki uyo anodzokera kuguta rake samwari-mambo. Pakusvika kwake anodhumhana nevaprisita vechitendero chake uye nekuvakwa kweimwe piramidhi rinosarudzira humambo hushoma munzvimbo yakasarudzika yakaparadzaniswa nevamwe vese veDiscworld.
Uye nhoroondo ye Rufu nezvinozotevera unogona kuiwana pano zvachose muchiCastilian. Iyo ipfupi nyaya inovavarira kuenderera mberi nesaga reVadiki Vamwari, mune iyi nyaya naRufu, huMwari hunowanzoonekwa kazhinji mubasa raSir Terry Pratchett.
Iri basa harina hukama chero neiyo Discworld, kana maguta kana nyika, asi harimire endererai matauriro ekutsvinya uye ndyaringo zvine kurwisa kweapocalypse, antikristu uye zviporofita. Mune ino kesi Sir Terry Pratchett vaive nekubatana kwe Neil Gaiman, muumbi we Sandman, pakati pemamwe akawanda mabasa.
Nación haana hukama naMundodisco futi, asi nemunyori, zvisinei zvakaburitswa mwedzi yakati wandei mushure mekunge aonekwa aine Alzheimer's. Mune rino basa, iine nhoroondo yekumashure, Sir Terry anotiudza nezve pfungwa dzake uye mu toni inofungisisa uye yakasarudzika mukati mebasa raSir Terry Pratchett. Iyi nhoroondo inotaura nezvaMau, iye chete akapona pachitsuwa mushure mekunge tsunami yabvisa zvese zvehupenyu pachitsuwa. Chinhu chisina kujairika asi iwo mamiriro akakura enhau inonakidza.
Iyo Gnome Ekisodho Trilogy
Iyi saga inotaura nyaya yemusha wemagnomes, taundi riri pamucheto pekutsakatika, iri taundi remagnome rakatarisana nenjodzi dzakadai rinofunga kufamba uye kuita rwendo rwavanowana njodzi, mamwe marudzi uye mamwe magnomes ekufamba pamwe chete. Iyi trilogy yakanangana nevechidiki nyika uye nekuda kweichi chikonzero hachiwanzotaurwa zvakanyanya kana uchitaura nezvemunyori kunyangwe zvisingadzikise pazviri zvishoma pane zvimwe zvakateedzana.
Iyo Johnny Maxwell trilogy
Iyi saga kana trilogy zvakare ine vadiki vateereri zvimwe kupfuura saga yapfuura. Iyi trilogy inotaurira mavambo uye hupenyu hwaJohnny Maxwell mukomana ane makore gumi nemaviri kuti anofanirwa kusiya guta rake kana vabereki vake vachirambana. Johnny Maxwell anopedzisira ave achiri kuyaruka kwaanogara mamwe marudzi ezviitiko, asi mumanovel ese tinogona kuona kukura kwaJohnny Maxwell
Mhedziso parwendo urwu kuburikidza nebasa raSir Terry Pratchett
Sezvauri kuona, Basa raSir Terry Pratchett harisi diki zvachose asi rakarairwa zvakanaka rinogona kunakidza. Nekudaro, kune rimwe divi ini ndakaparadzanisa mazita nemusoro wenyaya kana saga uye kune rimwe divi ivo vakaarairwawo nezuva rekuburitsa kunyangwe izvi zvisina kuremekedzwa zvakanyanya zvichibva pane zvinoreva uye kunzwisisa kwemuverengi, chimwe chinhu icho vakawanda unoziva wakakosha kupfuura kutsikisa mabhuku.
Chero zvazviri, sekutaura kwangu, hapana mutero uri nani pane kuverenga zvekare mabasa emunyori uye Sir Terry Pratchett agara achiratidza kuti akafanirwa nemutero iwoyo Haufungi here?
Kupedzisa uye kune vanonyanya kufarira, ndinokusiira infographic pane zvakarongeka uye nebasa rese raSir Terry Pratchett, infographic yatinayo nekuda kwevakomana kubva fancave uye kunyanya Alkar uyo akagadzira nemutsa uye akaita iri gwara rakanaka kune veruzhinji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fantasy » Ungatanga sei mubasa raSir Terry Pratchett